Home Wararka Somaliya Kulan ciyaareed Lagu qabtay Magalada Galkacyo laguna xusayay Maalinta Qaxootiga Aduunka
Kulan ciyaareedkan oo loo qabtay kooxo ku kala ciyaarayay magaca barakacayaasha iyo magaca dadka deegaanka ah ayna soo agaasintey Xarunta Waxbarashada, nabada iyo hormarka ee Galkacyo qeeybteeda galmudug “GECPD” oo kaah-shaneysa hey’adda qaxootiga caalamka ee UNHCR ayaa lagu maamuusayay maalinta qaxootiga caalamka.
Kulan ciyaareedkan oo ay usoo daawasho tageen qaybaha kala duwan ee bulshada Dhuusamareeb ayaa lagu gudoonsiiyay abaal-marino kooxaha wada ciyaaray, iyadoo madasha looga hadley duruufaha ku xeeran dadka ku barakacey Galmudug iyo sida ugu mudan ee looga caawin karo dhibaatada ku hor-gudban.
Safiyo Siigaale oo ah u qaabilsanaha Galmudug ee hey’adda GECPD ayaa ka warantey doorkooda wax ka qabashada xaaladaha Barakacayaasha iyo xuska maalinta Barakacayaasha Caalamka.
Maxamed Axmed Xasan (Fanax) oo ka socda hay’adda qaxootiga iyo barakacayaasha Galmudug iyo Mas’uuliyiin ka socotay bulshada ayaa iyana ku biiriyay hambalyada maalinta qaxootiga Caalamka.
Mohamed Osman Ali agaasimaha waaxda barakacayaaasha, qaxootiga iyo xalalka waaara ee wasaaradda Arrimaha Gudaha Galmudug ayaa ugu dambeyn u mahadceliyay dhinacyada soo agaasimey xuska maamuuskan loo sameeyay maalinta qaxootiga caalamka.
Previous articleBoliiska Soomaaliya iyo Kuwa Dowlad Gobaledyada oo Lagu wareejiyay Goobaha Doorashada
Next articleGuddiga u xil saaran farsamada Doorashada oo shaaciyay xilliga la xareenayo Guddiga Doorashada dalka